Isuroon ayaa 15 Dhalinyaro ah siinaysa Tababar Saxaafadeed. – Isuroon Somali
Home / Blog / Isuroon ayaa 15 Dhalinyaro ah siinaysa Tababar Saxaafadeed.
Ururka Isuroon qeybtiisa barashada Saxaafada ayaa waxa uu markii ugu horeysay tababar la xariira barashada Saxaafada waxa uu u furay in ka badan 15 dhalinyaro ah oo da’doodu ay u dhaxeyso 16 jir ilaa 24 jir.
Cashirada saxaafada ayaa waxaa bixinaya macalimiin taqasus u leh xirfada Saxaafada in mudo ahna ka soo shaqeynaysay, 15-ka dhalinyarada ah ayaa 12 ka mid ah ay yihiin Gabdho.
Casharada la barayo ayaa waxaa ka mid ah, Duubista Muuqaalada, Qaadista Sawiro wanaagsan, Habeynta Muuqaalada ay soo duubeen, Qurxinta Sawirada ay soo qaadeen, barashada guud ee Saxaafdaa, iyo sida ugu haboon ee loo isticmaalo Social Media.
Maxamed Muuse Noor “Deeqdarajo” oo ururka Isuroon u qaabilsan dhanka Saxaafada ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso xirfadaha dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo u mahad celiyey maamulka ururka Isuroon oo ku dadaalaya kor u qaadida aqoonta dhalinta Soomaaliyeed ee Maraykanka ku nool.
Fartun Weli oo ah aas aasaha iyo madaxa ururka Isuroon oo la hadashay dhalinyaradii ka qeyb qaadanaysa tababarkani ayaa kula dardaarantay in laga faa’ideysto isla markaana wixii la baray ay ugu adeegaan bulshada ay la nool yihiin.
Farhia Tahliil oo ka socotay ururka isuroon isla markaana ka mid ah bixiyaasha tababarkani ayaa sheegtay in casharadani ay ku bixi doonaan luqadaha Soomaaliga iyo English-ka iyadoo u diyaarisay ardayda casharo ay ku qoran yihiin labada luqadood.
Sidee loo caawin karaa waalidiinta caruurtooda qaba AutismBlog